तिथि मेरो पत्रु » शीर्ष4तपाईं डेटिङ थाह पाउनुपर्ने सुझाव
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 14 2020 |3मिनेट पढ्न
हामी हेर्न जताततै डेटिङ सुझाव संग awash हो. यो सबैको आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छ देखिन्छन् एक पाउन प्रयास मान्छे भरिएको संसारमा. अनि त अक्सर तिनीहरूले वास्तवमा यो सबै छैन सजिलो छ जब यो यति सजिलो ध्वनि. यो भने हामी सबै चाहन्छु पछि सबै हाम्रो सपना को मानिस वा महिला भेटेका छन्. त्यसैले म जस्तै कुरा भन्न गइरहेका छैनन् छु “तपाईं अझै फिर्ता तपाईं पकड छ जो अधिक प्राप्त र यसको लागि जाने छ।” हामी सबै हामी डेटिङ सल्लाह पढ्न आवश्यक छैन भनेर के गर्न सक्छ भने किनभने. त्यसैले म एक विशेषज्ञ दाबी छैन. के म दाबी गर्न बुझ्न सक्षम हुन छ. हामी सँगै यस मा सबै छन्.
यो शायद तपाईं डेटिङ खेल प्रवेश सम्झन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. तर यो शायद पनि अभ्यास मा गर्न मुश्किल छ. अनि म हामी लगभग सबै हामी जस्तै व्यक्ति उनलाई प्रभावित गर्न चाहनुहुन्छ विचार बाटो अभिनय दोषी भएको छु विचार. तर तपाईं बस कहिल्यै यसरी साँचो प्रेम पाउन जाँदैछन्. साँचो प्रेम सम्बन्ध छ. यो कसैले तपाईंलाई छन् जो वास्तव लागि देखेर र यसको लागि तपाईं adoring छ. आखिर तपाईं आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अभिनय मार्फत जाने जाँदैछन्? तर यो एक जिम्मेवारी पनि आउँछ संग. फलस्वरूप उनीहरूले हुन् सम्मान हुनुपर्छ. उदाहरणका लागि तपाईं एक कठिन घुमाव हुन सक्छ तर तिनीहरूले पप मा cheesiest को cheesiest मन. के तपाईं आदर गर्न तिनीहरूलाई चाहन्छु जस्तै तपाईंले तिनीहरूलाई आदर गर्न आवश्यक. प्रत्येक अन्य परिवर्तन गर्न नगर्नुहोस्. म दिगो सम्बन्ध मा मान्छे देखि यो सुनेको छु. यो तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ नराम्रो कुरा हो. यो केवल द्वेष र दुःखमा गर्न जान्छ.
साना कुराहरूको कदर गर्दै
तपाईं केही निश्चित बडा इशारा जस्तै गर्न र wined र खाना खा गर्न किनभने व्यक्तिले हो यो खेल कसरी न्याय हुनेछ! तर साधारण धारणा जस्तै छ सबैलाई धेरै आफ्नो दिन कति सोधेर मात्र पाठ रूचाउँछु जब कि छ. म गर्छन अघि र यो सहमत कि भन्दै मानिसहरूले सुने छु. तपाईंलाई एउटा उपहार तिनीहरूलाई रही छन् भने एक धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरूले के रुचि चिन्न आवश्यक छ. यो एक तिनीहरूलाई चासो र जो तिनीहरूले छन् देखाउँछ. यस्तो फूल रूप सामान्य उपहार, चकलेट र आफ्टरशेव / अत्तर सुरुमा ठीक हो तर सम्बन्ध आफ्नो उपहार दर्जी प्रगति को रूप तपाईं डेटिङ गरिरहनुभएको व्यक्ति एक बिट बढी व्यक्ति हुन.
हो, तपाईं एक लजालु व्यक्तित्व छ भने यो एक मुश्किल छ. होइन लजालु बाहिरी तल bubbling राय को एक धन छैन कि (हामी सबै भन्दा लेखकहरूले बन्न किन त्यो हो!) तर तिनीहरूलाई व्यक्त गर्न विश्वस्त हुन सधैं सजिलो हुँदैन र एक व्यक्ति तपाईं चिन्न छ किनभने तपाईं दुःखको कुरा प्रेम भेट्टाउने बाटो मा प्राप्त गर्न सक्छन्. त्यो तिनीहरूले तपाईं रुचि या प्रारम्भिक आकर्षण निम्न छैन चाहे निर्णय कसरी गर्ने. जाहिर जीवनमा मन, प्रेम नै छ र के तपाईं आफ्नो राय व्यक्त गर्नुपर्छ र के अवस्थामा थाह साधारण अर्थमा र अरूको सल्लाह प्रयोग गर्न आवश्यक हुनेछ यो शान्त राख्न सबै भन्दा राम्रो छ तर जब तपाईं उनलाई तपाईं को हुन् थाहा सक्नुहुन्छ गर्दा. तपाईं अझै पनि लजालु हुन सक्छ. त्यो आकर्षक हुन सक्छ. तर पनि खुला हुन प्रयास. अनि त्यो मदत गर्न तरिकामा संचार मा एक पाठ्यक्रम गर्न हुनेछ (वा केही!), साँझ कोर्स गर्न, एक Toastmasters जाने या बस एक सामाजिक वातावरण मा त्यहाँ तपाईं सकेसम्म आफूलाई प्राप्त. यो डरावना छ तर यो यसको लायक छ. मेरो सयपत्री सधैं भनेझैं, तपाईं अन्य मान्छे को लागि आफ्नो जीवन रोकिनु हुँदैन.
तपाईं को लागि व्यक्ति छान्नुहोस्
मान्छे के भन्ने धेरै साधारण कुरा तिनीहरूले विचार के परिवार वा साथीहरू आधारित कसैले टिप्न छ. सबै सल्लाह समझदार छ जहाँ ध्यान सल्लाह अर्थ गरेर / उहाँले मानिसहरूलाई शायद मात्र तपाईं को लागि बाहिर देख रहे एक लागू पदार्थ दुर्व्यसनी छ को रूप मा यदि यस्तो. तर मानिसहरू सबैलाई दिएको प्रकार र हामी लागि जाने व्यक्ति को प्रकार रूपमा आफ्नै प्रकार लगान झुकाव हामीलाई अनुपम छ छ. तपाईं एक hippy वा तपाईं कहिल्यै एक देश किसान र विपरीत खुसी हुन जाँदैछन् एक beatnik लागि देख रहे भने. डेटिंग को दुनिया अप्रत्याशित छ किनकि हुन अपवाद छन् तर सामान्य नियम मा हामी सबै हामीलाई संग फिट गर्ने कसैलाई खोजिरहेको छन् र हामी संग आराम गर्दै छन् कसैसित हुनुपर्छ र जो हामीलाई उत्तेजित. तिनीहरूले आफ्नो प्रियजन छ किनभने यो कसैसित भएको कुनै राम्रो’ अनुमोदन को छाप. तिनीहरू डेटिङ यिनै छैनन्. तपाईं छन्. अनि तपाईं त उनलाई तपाईं को लागि निर्णय गर्न अनुमति छैन के भन्नुहुन्छ थिएन. अनि आफ्नो निर्णय र आफ्नो मन भरोसा. प्रेम मा तपाईंको आफ्नै सहज सामान्यतया सही हुन्छन्.